BAKALOREA ANDIANY FAHAROA : Hivoaka ny 10 novambra izao ny voka-panadinana eto Mahajanga
Fitopolo isan-jaton’ireo taratasim-panadinana no efa vita tsara amin’izao fotoana izao tamin’iny fiatrehan’ireo mpiadina bakalorea andiany faharoa na « session speciale » natao ny 23 oktobra ka hatraminy 26 oktobra lasa teo. 6 novembre 2019
Tsahivina fa noho ny fiparitahan’ny laza adina mialoha ny fotoana taminy andiany voalohany no nahatonga ny fitondram-panjakana nanolotra fahafahana ho an’ireo nanao ny tsy ambinina tamin’ny voka-panadinana voalohany iny. Tsy maintsy hoenjehina mandritra ny roa herinandro toy ny fitsarana ny fanadinana bakalorea tamin’iny andiany voalohany iny ihany no hanatrarana ny fitsarana ity famerenana manokana andiany faharoa ity hoy i dokotera Rakotovelo Géoslin, filohan’ny fitsarana no sady lehiben’ny foibem-panadinana ao aminy lisea Philibert Tsiranana eto Mahajanga.
Roapolo ambiny zato tamin’ireo mpiadina voasoratra anarana efa-polo sy fitonjato tokony ho namerina ny fanadinana faharoa no tsy tonga niatrika izany intsony ho an’ny foibem-panadinana Philibert Tsiranana, izay heverina fa efa ho manomana ny hamerina ny folo volana manaraka indray amin’io taom-pianarana ho avy io ireo mpianatra tsy tonga ireo.
Toy ny efa hita tamin’ny voka-panadinana bakalorea andiany voalohany, dia ny taranja siantifika no nanahirana ireo mpiadina araka ny fitsarana tsikaritr’ireo mpitsara hatreto, fa indrindra ny matematika. Ka niantsoan’ity lehiben’ny sampam-pitsarana tao aminy foibem-panadinana Philibert Tsiranana ity ny fitondram-panjakana mba tsy hitsabaka aminy politikam-pampianarana eny aminy kaolejy momba ny taranja ara-tsiantifika. Efa ho roapolo taona lasa izay no niantsoan’izy ireo ny minisitera mba hananganana ny kaonseritra nasionaly ny fanabeazam-pirenena sy fikarohana ara-tsiasy, hanarenana ireo lesoka ny tsy fahombiazan’ireo mpianatra amin’io taranja siantifika io, saingy tsy nisy valiny izany hatreto hoy hatrany ny lehiben’io foibem-panadinana ao aminy lisea io. Mety ho tsara ny naoty ho an’ireo mpiadina ny fanadinana bakalorea amin’izeny taranja siantifika hisondrotany eny amin’ny anjerimanontolo, saingy valopolo isanjato amin’ireo mpianatra tonga mandranto fianarana eny, avy eo no resy tanteraka ka tsy mahatody ny fianarany noho ny tsy fahafehezany io taranja siantifika io.
Fa raha hiverenana ny fitsarana ny laza adina ny fanadinana bakalorea dia natao ho tsiambaratelo hoy ny tompon’andraikitra ny fanapahana ny naoty farany ambany hahafahana ny fanadinana ho an’ireo mpianatra, fa tsy azo ambara ny mpanao gazety, saingy noferana hitovy io naoty io eo aminy sehatra nasionaly.
Raha ny mpampianatra mpitsara kosa no nanapaka ny naoty farany ambany noraisina ho afaka teo amin’ny fanadinana bakalorea ara-teknika, hoy ny filohan’ny mpitsara amin’izy ireo teto Mahajanga dia tsy voatery nitovy tany amin’ireo faritra hafa. Marihina fa mpiadina valo sy efa-jato no afaka, manome 54,11 isan-jato ny taham-pahafahana bakalorea teknika teto an-toerana, araka ny vokatra ofisialy voaray ny alarobia 30 oktobra lasa teo tamin’ity taona ity teo Mahajanga. Ny taranja matematika sy anglisy no naoty ambany indrindra teo aminy sehatra ara-teknika io, araka ny tsikaritr’ity lehiben’ny sampam-pitsarana ity.
Tambatr’isa teo amin’ireo sampam-pianarana ara-teknika sy arak’asa teo Mahajanga no nahazoana nanangoana ny taham-pahafahana, dia ny tao aminy lisea teknika, ny tao amin’ny sekoly St gabriel, ny sekoly Marie Auxilatrice eny Antanimasaja ary ny Don Bosco izany.